Konke mayelana Nokuphrinta kwe-3D - I-Hardware Yamahhala | ihadiwe yamahhala
Ukukhiqiza okungeziwe kunemikhakha eminingi yokusetshenziswa, kokubili emkhakheni wezokungcebeleka kanye nezimboni nobuchwepheshe. I Ukuphrinta kwe-3D okwamanje, futhi ikusasa lakhona libukeka likhanya nakakhulu ukuxazulula izinkinga kuze kube manje ebezingakwazi ukwenziwa ngezinye izindlela ezijwayelekile zokukhiqiza. Ngaphezu kwalokho, kungukutholwa kwangempela kwabathandi nabenzi be-DIY, ngakho-ke kufanele wazi yonke into ngabo.
Kulo mhlahlandlela ungafunda kusukela kokulula kuya kokuyinkimbinkimbi kakhulu. Njengeyunithi ye-voxel, idlula kokuthi kungani iyiphrinta ye-3D nokuthi isebenza kanjani, umlando wayo omncane, izinyathelo zokuklama zamamodeli kuze kube yilapho imodeli iphrintwa, idlula kusofthiwe edingekayo, izigaba zokukhiqiza okungeziwe, kanye izicelo okungenzeka (imboni, imfundo, ezokungcebeleka, ubuciko, imithi,...).
I-STL namanye amafomethi wefayela
Ulwazi mayelana nefomethi ye-STL kanye nezinye izinhlobo zamafomethi amamodeli okuphrinta, kanye nokuguqulwa okungenzeka, kanye nesofthiwe edingekayo.
Konke odinga ukukwazi mayelana izici zohlobo ngalunye lwephrinta ye-3D obukhona: ubuchwepheshe, izinzuzo kanye nokubi ngakunye, kokubili okusetshenziselwa ukusetshenziswa ekhaya kanye nalezo ezisetshenziselwa umsebenzi womsebenzi nezimboni, ama-bioprinters, amapensela e-3D, njll.
Ungayikhetha kanjani iphrinta ye-3D
Lapho udinga ukukhetha iqembu elisha kuvela ukungabaza okuningi, futhi kulo mhlahlandlela ku indlela yokukhetha iphrinta ye-3d ungaqeda ukungabaza kwakho. Uzofunda ukuthi yini okufanele uyicabangele ukuze wenze ukukhetha okuhle ngokuya ngezidingo zakho, izici zobuchwepheshe eziyinhloko ze-filament, i-resin, namaphrinta e-3D yezimboni, ezinye izinsizakalo zokuphrinta ze-3D, amanani, indlela yokufaka iphrinta nezinyathelo zokuqala. ukuqala ukuphrinta.
Ezinye izincomo ze amabhrendi namamodeli amaphrinta we-3D ashibhile kakhulu Yini ongayithenga
Iyiphi iphrinta ye-3D okufanele uyithenge ekhaya
Uma ufuna okuthile kwekhaya okunezici ezinhle, kodwa ngaphandle kokumba eqolo, nakhu uya khona izincomo ezinhle kakhulu yamaphrinta e-3D abenzi nabazithandayo.
Iyiphi iphrinta ye-resin ye-3D ongayithenga
Ezinye ze best resin 3D iphrinta brand namamodeli ukuze ungenzi iphutha ekukhetheni, kulawo amafilamenti awanele.
Iyiphi iphrinta ye-3D yezimboni ongayithenga
Uma uzoyisebenzisa ngobungcweti ekuxhumaneni nocingo noma uma unenkampani futhi udinga iphrinta ye-3D yezimboni, nazi ezinye ezihamba phambili.
Imicu yamaphrinta we-3D nama-resin
Njengoba nje kumaphrinta ajwayelekile udinga ukuthenga amakhatriji kayinki namathoni, kumaphrinta e-3D uzodinga olunye uhlobo izinto ezisetshenziswayo, njengama-filaments nama-resin. Nazi ezinye izincomo zale mikhiqizo nazo zonke izinto zokusebenza ongaphrinta kuzo.
Izingxenye ezisele zamaphrinta e-3D + umhlahlandlela wokunakekela nowokulungisa
Thola zonke izingxenye ozidingayo yephrinta yakho ye-3D: izisekelo, imibhede, amashidi e-PEI, okunamathiselwe okushisayo, okokukhipha, imilomo, amashubhu e-PTFE, amamotho anyathela, ukunikezwa kwamandla, amabhande esikhathi, ama-pulleys, ama-bearing, ama-thermistors, ukupholisa, okothambisa, izibani, amathangi eresin, nokuningi . Ngaphezu kwalokho, uzokwazi futhi ukufunda indlela yokulondoloza iphrinta ye-3D (ukulinganisa, ukuhlanza,...) nazo zonke izinkinga ezingenzeka kanye nezixazululo zazo.
Nazi ezinye zazo izikena ezihamba phambili ze-3d ongazitholela amaphrojekthi akho ochwepheshe noma wokungcebeleka, ukuze ukwazi ukuthekelisa noma yisiphi isigcawu noma into ethile kufomethi yedijithali ye-3D ukuze uyiphrinte kuphrinta yakho ye-3D, uyithinte kabusha, njll. Uzokwazi futhi ukufunda izici zalawa madivaysi, izinhlobo, ukuthi ungakhetha kanjani ofaneleka kakhulu kuwe, njll.
I-Las Amaphrinta we-3D inokukhula okukhona emphakathini wethu futhi akungabazeki ukuthi i- Ukuphrinta kwe-3D iyachuma. Kulesi sigaba nangezindatshana zethu sizokunikeza izindaba ezithokozisayo ngalolu hlobo lwamaphrinta nokuphrinta, isibonelo ukunquma ukuthi iyiphi idivayisi ongayithenga noma ufunde ukuthi uyisebenzisa kanjani. Uma udinga ulwazi mayelana nokuphrinta kwe-3DZenze ukhululeke ngoba usufinyelele isiza esihle kunethiwekhi ukuyithola futhi ufunde nezinto ezingamakhulu.
Uma ufuna iphrinta ye-3D ye-resin enhle, kulo mhlahlandlela uzobona izinhlobo ezinconyiwe namamodeli kanye…
Thenga isithwebuli se-3D: indlela yokukhetha okungcono kakhulu
Ngaphezu kokukwazi ukuziklama i-geometry yesiqeshana ofuna ukusiphrinta kuphrinta yakho ye-3D usebenzisa isofthiwe,...
Izingxenye ezisele zephrinta ye-3D nokulungisa
Amaphrinta e-3D anezinkinga kanye nokuwohloka njenganoma yimuphi omunye umshini, ngakho-ke kufanele wazi ukuthi uwenza kanjani ukunakekelwa okufanele...
Imicu yamaphrinta we-3D ne-resin
Ama-Toner nama-inki cartridges asetshenziswa amaphrinta e-2D, nokho, amaphrinta e-3D adinga ezinye…
Ukukhiqiza okungeziwe sekube yizinsizakusebenza ezithembisayo kakhulu emkhakheni wezimboni. Lolu hlobo lokukhiqiza...
Iyiphi iphrinta ye-3D ongayithenga ekhaya
Ngaphambilini sibonise izincomo kumaphrinta ashibhile, kodwa… kuthiwani uma ufuna okuthile okungcono? Khona-ke, kulesi esinye isihloko...
I-Octoprint: phatha iphrinta yakho ye-3D ukude
Uma uthanda ukuphrinta kwe-3D, ngokuqinisekile uzothanda ukwazi okwengeziwe ngephrojekthi ye-Octoprint. Isofthiwe yekhodi...
Ayanda amabhrendi nezinhlobo zamaphrinta e-3D ashibhile, ngakho kuya ngokuya kuba nzima ukukhetha...
Lapho ukungabaza kukuhlasela lapho uthenga, akukho lutho olungcono kunokwazi izici ezibaluleke kakhulu…
Uma ungene emhlabeni wokuphrinta kwe-3D, ngokuqinisekile ukubonile endaweni engaphezu kweyodwa...
Esihlokweni esandulele senze uhlobo lwesingeniso emhlabeni wamaphrinta we-3D. Manje sekuyithuba lika...